पबजीको ‘विश्वकप’ आजदेखि, २२ करोड रुपैयाँको वर्षा, अन्तिम भए पनि १२ लाख पक्का - बैदेशिक पोष्ट
पबजीको ‘विश्वकप’ आजदेखि, २२ करोड रुपैयाँको वर्षा, अन्तिम भए पनि १२ लाख पक्का
in सूचना प्रबिधि
मंसिर ९, २०७८ ०९;३९ बिहान प्रकाशित
काठमाडौं। पबजी खेलको लोकप्रियता विश्वभरी नै छ । यो खेलमा हरेक महिना करिब ५२ करोड खेलाडी सक्रिय रहन्छन् । दैनिक सक्रिय खेलाडीको संख्या पनि करिब ४ करोड छ ।यो खेल बनाउने क्राफ्टन कम्पनीले यिनै खेलाडीहरुको लागि पबजी ग्लोबल च्याम्पियनशिप ल्याएको छ । प्रतियोगिता आज बिहानदेखि सुरु भएको छ र १९ डिसेम्बरसम्म चल्नेछ । सबै प्रमुख वेबसाइटमा यसको लाइभ स्ट्रिमिङ गरिनेछ ।
पबजी ग्लोबल च्याम्पियनशिपमा विश्वभरबाट ३२ टिम सहभागी हुनेछन् । सबै टिमलाई गरेर कूल १८ लाख ६० हजार डलर (२२ करोड रुपैयाँ) पुरस्कार दिइनेछ । यीमध्ये पहिलोदेखि १६ औं स्थानसम्म रहने टिमले फरक फरक राशी पुरस्कार पाउनेछन् । १७ देखि २०, २१ देखि २४ र २५ देखि ३२ औं स्थानमा रहने टिमहरुलाई समान राशीको पुरस्कार दिइनेछ ।
प्रतियोगिताको फाइनल ३ दिनसम्म चल्नेछ । यसमा हरेक दिन ५ म्याच खेलिनेछ । पुरस्कार जित्ने सबै खेलाडीहरुलाई कोरियाको इंचियोन प्याराडाइज सिटीको यात्रा गराइनेछ । त्यहाँ सबैलाई करिब २ मिलियन डलरको पुरस्कार दिइनेछ । प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै मार्ने खेलाडीलाई १० हजार डलर (१२ लाख रुपैयाँ) र टिमलाई २० हजार डलर (२४ लाख रुपैयाँ) पुरस्कार दिइनेछ । प्रतियोगितामा अन्तिम हुनेलाई पनि १० हजार डलर पुरस्कार दिइनेछ ।
मंसिर १४, २०७८ २१;५१ मध्यान्ह प्रकाशित
अब आइफोन प्रयोगकर्ताले आफैं फोन मर्मत गर्न मिल्ने
मंसिर ४, २०७८ १८;४३ मध्यान्ह प्रकाशित
प्रयोगकर्ताको मृत्युपछि के हुन्छ आईफोनमा रहेको डेटा ?
कार्तिक २८, २०७८ ११;०४ बिहान प्रकाशित
राउटर किन्दै हुनुहुन्छ ? ख्याल राख्नुहोस् यी ८ कुरा
कार्तिक २४, २०७८ १६;०३ मध्यान्ह प्रकाशित
अब फेसबुक ग्रुपबाटै पैसा कमाउन सकिने, यस्तो छ उपाय
कार्तिक २४, २०७८ १३;५७ मध्यान्ह प्रकाशित